Athene ababuthakathaka noma kwamaphutha? Asithena: izakhiwo ewusizo kanye contraindications. Izinzuzo asithena ngesikhathi sokukhulelwa futhi neminye
Uyini asithena? Akayena ekwelapheni ngakho? Athene ababuthakathaka noma kwamaphutha? Ingabe ikhona abazuzayo kuso kwabesifazane abakhulelwe? Futhi izingane? Okunjalo inqwaba imibuzo akukhona nje ukuqondana kwezinto. Abantu bakwa asithena-legends. Yena udumo ngokuyisimangaliso ukuphulukiswa izakhiwo: liyakwazi ukubuyisela ubusha, muhle futhi ube nobunye. Bathi ukuthi linobuqili, uma sokumethemba enganakile.
Indlela Pheka asithena
asithena Kuhle eyatholakala kusukela plums izinhlobo Hungary sika Italian. ikhaya Ibanga Hungary kubuye omuhle kakhulu asithena. Ukusetshenziswa ezinye izinhlobo. Plum izithelo kumele zidlule izigaba eziningana ukucubungula.
Kukhethwe amajikijolo ezivuthiwe ezinhle (okungenani ngo-10% ushukela, akukho kuka 1.2% acid).
Iphathwa ngamanzi abilayo ukususa qwembe - kuyoba lula inqubo yokoma kwamanzi.
amanzi selehlile (mhlawumbe egijima).
Khona omisiwe amadivayisi ezikhethekile amahora mayelana 36, ukulungisa lokushisa 80 kuya ku-60.
Ngemva lolu hlobo.
imizuzu 1.5-2 ibekwe ngamanzi abilayo.
Welashwa nge glycerol (glycerol ratio futhi izithelo kumele singeqi izinga).
Ngemva kwale kwelashwa, asithena etholwe lokuqala, ekilasini lesibili noma lesithathu. Kuyinto soft, amnandi futhi ukunambitheka omuncu, abamnyama. Uma okungenani esinye sezici awafani incazelo ke sokukhipha ukucutshungulwa ubuchwepheshe iphukile, futhi umkhiqizo okuholela libizwa ukuhlakula engenakwenzeka. Strange kodwa kuyiqiniso! Lokhu asithena has ukunambitheka esiyingqayizivele. Ukudida nomunye ukunambitheka umkhiqizo akunakwenzeka.
Kuyamangalisa ukuthi, nokuba nzima indlela ukucubungula ezinjalo, asithena azigcina ngezithako zawo izakhi efanayo, lokho has abakhwabanisi, elenga egatsheni lesihlahla. acid organic, ushukela, Imicu yotshani yemifino kukhona main chemical izakhi elinabantu asithena. Futhi akuyona bancishwa amavithamini, sodium, i-potassium, i-calcium, i-phosphorus nensimbi.
Ngenxa okuqukethwe okusezingeni eliphezulu amaminerali namavithamini asithena uzuze umzimba kuyinto palpable kakhulu. Ukwakheka izithelo ezomisiwe ichaza zokugula nezifo eziningi lapho kuyinto efiselekayo ukusetshenziswa njalo. Asithena anconywe izifo zenhliziyo okwakuhlalwa kuzo lapho kusaqalwa, ngokuba ukuzinza wegazi, izinga lokugayeka kokudla emzimbeni, ukuqedwa senkinga isifo sezinsini. Ngakho-ke anezakhi amagciwane. Asithena amathoni, sivuselela futhi kuthuthukisa ukusebenza kwezitho eziningi, kwandisa amandla omzimba ukumelana nazo zonke izifo ezihlukahlukene. Kukhona mazwi acacile ukuthi lo mkhiqizo antioxidant enamandla, kuyasiza ngisho ukuba sibhekane ngokuphumelelayo umdlavuza. Ngakho-ke, ukusetshenziswa njalo ukuhlakula ekudleni Kunconywa abantu abahlala ezindaweni Isizalo okungekuhle.
Ukuze ubuyise okuqukethwe amaminerali namavithamini emzimbeni ukudla okwanele nsuku zonke 5-6 amajikijolo izithelo omisiwe. Ukudla asithena ngezikhathi nokuntuleka amavithamini is ikakhulukazi Kunconywa.
Athene kwamaphutha ababuthakathaka noma: funda
Ethandwa kakhulu e asithena Folk imithi etholwe njengendlela laxative. Ngenxa yalezi zinjongo, ke ingagxila injalo zemvelo noma wenze decoction. Ilungiselela silula: asithena uthele amanzi abilayo, lona yenza amahora 10-12. Lokhu umhluzi edliwe njengoba kudingeka, amajikijolo futhi ezazidliwa. "Ukuthuthukisa candy" - kungenye indlela ukuqeda ukuqunjelwa. Ukuze ukulungiselela yabo uzodinga 4 asithena amajikijolo, amakhiwane 4 futhi ithisipuni elilodwa coriander. Izithelo ugaye, azihlanganise coriander, ihlukaniswe izingxenye alinganayo (ithisipuni), ezibekwe kule esiqandisini. Omunye dambisa enjalo amnandi ngisho ukuqunjelwa olunzima. Relief iza amahora amabili.
Isayensi, futhi, kuye kwabonakala izakhiwo laxative ka asithena, kokuba umkhiqizo zokwelapha ngo-2011. It is wafakazela ukuthi lezi amajikijolo bayakwazi ukuthambisa kwesihlalo, osebenza njengokuvimbelayo ukukhanya izidakamizwa laxative. Ngakho-ke, amanye amazwe odokotela ngokusemthethweni elibekelwe iziguli asithena ukuxazulula le nkinga olubucayi.
Abantu kukhona omunye yisiyalo ukufakwa ekudleni umkhiqizo. It kuvela ukuthi ukusetshenziswa asithena iyisitshulu uyakwazi akuvezi laxative, futhi iyathambisa emzimbeni.
Ngakho uwuthene ababuthakathaka noma kwamaphutha? Ukukhuluma lo mkhiqizo, ngokuvamile bayazidlalela: "He is esihlalweni ababuthakathaka ngokusebenza okunje, kuqinisa umzimba."
Athene futhi Ukunquma sibalo
Imibono nompetha nemiphumela emihle umkhiqizo ku esisindo ziyangqubuzana kakhulu. Kuyaphawuleka ukuthi asithena - a okune-calorie. eyikhulu amagremu ke kunikezwa umzimba 231 kcal. Emzimbeni (omisiwe) umkhiqizo uzokunika 339 kilojoule. Ngo asithena iyisitshulu iqukethe kilojoule 113, futhi okusemathinini - 105 kcal. Lezi idatha ukuvumela ukuba siphethe ngokuthi izinzuzo ka asithena neminye encane. umphumela Direct ngokuvumelana bobunjwa, lo mkhiqizo kungaqali, kodwa ngokungaqondile ukuhlanganyela ohlelweni kwesisindo eyamukelekayo ngempela. Ngokwesibonelo, asithena ingasetshenziswa (ngezinye izikhathi ukusebenzisa ne-yogurt) njengoba umkhiqizo isidlo, kanjalo ukususa zonke-ukulambela kwethu isikhathi esithile. Ukudla izithelo ezinhlanu asithena ngaphambi kokudla kunciphisa esesuthi, futhi lokhu kuthinta inani ukudla ngesikhathi sedina. Kahle Kuyaphawuleka ukuthi izakhiwo laxative ka asithena akusiza ukuba unciphise umzimba, kodwa ukunciphisa isisu, engavela ngenxa sezinyawo okungajwayelekile, kungenzeka.
Sinesithakazelo ngokukhethekile asithena njengoba umkhiqizo, ezithinta emalini ukwenzela ukungena okuncane kakhulu uvele Eighties emva izifundo ezikhethekile. Kuye kungase kutholakale ukuthi lokhu izithelo ezomisiwe - plums a elwa nokudangala omkhulu, ngakho umuntu wanquma ukuhlala Ukudla (ikhona) 1-2 amajikijolo omisiwe ngosuku kuyoba usizo kakhulu ukuba ngcono ukusebenza isimiso sezinzwa, ngcono isimo. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo wethu - engathatha omkhulu for amaswidi. Abaningi ethandwa kwesisindo zokupheka zihlanganisa asithena. Kunemibono engafani mayelana nekhono yawo yokwehlisa isisindo, kodwa bonke ochwepheshe abavumayo entweni eyodwa: asithena kalula kulolu hlu ukudla okunempilo.
Ukudla asithena ngesikhathi sokukhulelwa
Nge ukuqala ukukhulelwa, omama abakhulelwe kufanele ayibheke ngamanye amehlo ekudleni kwakho. Ezinye evamile ukuthola le mikhiqizo awela isigaba kungavunyelwe, kodwa ezinye izitsha kakhulu Kunconywa ukuba isetshenziswe. Phela, noma yini uthola owesifazane ngokudla nangokwenama uthola kid. Ngayiphi isigaba izithelo ezomisiwe yethu? Its nakanjani zonke ochwepheshe bathi esigabeni kwemikhiqizo Kunconywa njengoba asithena zisebenzisa ngesikhathi sokukhulelwa isobala.
Omunye ezivamile izinkinga abesifazane e isikhundla lube buthaka imisebenzi ayisivikelo ngalo ingaphakathi ngomlomo. Make ukopha kwezinsini, kungenzeka kwamazinyo, okuyinto ngenxa ukushintsha kwama-hormone emzimbeni kamama esizayo. ukusetshenziswa evamile asithena Ukusiza ukuxazulula izinkinga izinsini namazinyo.
Ngalezi izithelo e umzimba ingena isamba elanele potassium, esinikela okuqhubekayo izinso umsebenzi. Futhi kubalulekile ukuba umama nengane.
Uma asithena ukwenziwa itiye elimnyama futhi niphuza le isiphuzo, kungenzeka ukugwema izinkinga nangomfutho wegazi, nakho ingenye izifo kwabesifazane abakhulelwe.
omama abaningi esizayo uhlushwa ukuqunjelwa. Izindlela kangcono ekuqedeni lesi inkathazo asithena, kusukela ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngenxa engathandeki abakhulelwe.
Mhlawumbe ethile kuphela somkhiqizo wethu ukuthi vysokokalorien. ukusetshenziswa okweqile amajikijolo kuzoholela ezingadingekile kwesisindo okuyinto contraindicated kubantu besifazane abakhulelwe.
Asithena futhi ukubukeka
Mayelana izakhiwo yezimonyo of asithena, futhi, kukhona wokubuyekezwa okuvumelekile. It uyakwazi kubonakale ngcono ukubukeka kwesikhumba, rejuvenation kwenzeka uma usebenzisa asithena.
Uma ucabangela izakhiwo ezuzisayo asithena omisiwe (omisiwe) futhi ukunambitheka kwako esiyingqayizivele, lo mkhiqizo yasetshenziselwa ukulungiselela lenqwaba neziphuzo: salads, appetizers, isiphuzo, wesibili kanye izitsha kuqala. Ekulungiseleleni kophudingi asithena futhi ithatha indawo evelele. Ndawonye mkhiqizo livame ukusetshenziswa ukhilimu, amantongomane, yogurt. Kodwa ikakhulukazi asithena befriended nge inyama. Uma inyama engeza akhiphe ukuhlakula, kungenzeka ukuba ugcine kukusha, kanye nezithelo ezomisiwe ayishintshi ukunambitheka umkhiqizo main.
Ukusebenzisa lezi izithelo ezomisiwe, kungaba ngcono ukunambitheka izitsha ezijwayelekile ezifana okusanhlamvu, salads.
Asithena kanye zokupheka of imithi yendabuko
Kwaphela amakhulu eminyaka ukusetshenziswa asithena njengendlela yokuthola ephulukisa abanye zokupheka beqashelwa yangempela phakathi kwabantu. Banikeza iseluleko sendlela udle asithena yokuthuthukisa impilo. Ngokwesibonelo, ngemva izifo ezinzima ezithathelwanayo Kunconywa ukuba asebenzise cocktail compote of izithelo ezomisiwe ocebile asithena. iresiphi Okuvame kakhulu tonic begazi. Ukuze silungiselele ke, kumelwe sifunde letilinganako asithena oqoshiwe (izakhiwo ewusizo kanye contraindications okuyinto Sekuyisikhathi eside wafunda), omisiwe amabhilikosi omisiwe, walnuts. Zonke uhlanganise uju kanye adle njalo ekuseni nakusihlwa ithisipuni elilodwa.
Izimo ukusetshenziswa asithena
Nge zonke izici ezinhle komkhiqizo Kusafanele banake ezinye izici engavela ngenxa ukusetshenziswa okweqile asithena.
okuqukethwe Ephakeme izithelo ezomisiwe kanye difenilisatina sorbitol angadala isifo sohudo.
Kungase kube amacala ukungabekezelelani ngabanye komkhiqizo, ngakho izinyathelo ezidingekile ngokusetshenziswa kwayo kuyi ukudla.
Asithena - umkhiqizo okunama-kilojoule amaningi, ngakho ukusetshenziswa kwalo ngokweqile is contraindicated akhuluphale ngokweqile.
Lokhu izithelo ezomisiwe is hhayi Kunconywa ukuba nabancelisayo, ngoba ingabangela ecasukile e wamathumbu imikhuba ezinganeni.
Ngakho siqonda lo mbuzo: "? Iyiphi inzuzo has asithena, ababuthakathaka noma uthola umkhiqizo, abangakwazi, futhi ubani akubandakanyi ke ekudleni"
Iqoqo sezindela nomfutho wegazi ophezulu. nomfutho wegazi ophezulu Engamakhambi: Izibuyekezo
Ngezindlela ezintathu: njengoba ekhaya ukuze kutholakale amafutha ulwandle lalesi sihlahla
Ukwelapha zikaphayini Izigaxa zezifo ezahlukene
Ibhizinisi Vendingovy. Iinsetjenziswa isidlo - kuyini nokuthi ungayenza kanjani imali?
Antacids, izidakamizwa. Uhlu bese usebenzisa amathuluzi ethandwa
Umgomo we operation ye-heater lefoni. heater infrared: Ukucaciswa
Uyini Tube Cathode Ray
Tincture - ngumhlonyane: imithi kanye ushevu
Ukubhula ngoba uthando ekhaya. Ukubhula for Girls Love
Emasiko, imisimeto namasiko: Endabeni izenzo isiko ku Shrove ngoLwesibili nama-Easter
Indlela ukukhetha vacuum cleaner ezimbonini ukhonkolo uthuli?